Codeynta Xubnaha Aqalka hoose ee Jubbaland iyo Koonfur galbeed ayaa Gashay Maalintii labaad, Hirshabelle ayaa iyadana Qabaneysa Doorashooyinka Aqalka Sare. | UNSOM
06:08 - 21 Sep
Codeynta Xubnaha Aqalka hoose ee Jubbaland iyo Koonfur galbeed ayaa Gashay Maalintii labaad, Hirshabelle ayaa iyadana Qabaneysa Doorashooyinka Aqalka Sare.
Mid Ka mida ergada ayaa codkeeda dhiibanaysa, intii lagu guda jiray doorashada xubnaha aqalka hoose ee Baarlamaanka Magaalada Kismaayo, Soomaaliya November 9, 2016. UN Photo / Awil Abukar
Afar iyo toban xubnood ookale oo ka tirsan baarlamanka ayaa manta lagakala doortay dowlad goboleedyada Jubbalandiyo Koonfur galbeed, sidoo kale waxaa loo codeeyay sided xubnood oo aqalka sare ah kuwasoo matalaya maamulka cusub eeHirshabelle iyadoo lagu soo gabagabeeyaycaasimada Hirshabelle ee Jowhar.
Labo ka mid ah sideeda xubnood ee baarlamankamaanta lagu doortay Koonfur galbeed ayaa ahaadumar,sidoo kale haween ka badan labo ayaalagu doortay baarlamanka Jubbaland.
Ilaa hadda 8 haween ah ayaa ku guuleystaykuraasta aqalka hoose guud ahaan 40 xubnoodoo la doortay ilaa iyo markii ay puntland kabilaabatay doorashoyinka 5 November. Taasiwaxa ay cadeyneysaa in si habsami leh ku socotoqoondadii haweenka ee ahyed boqolkiiba 30 tasoo meel mariyeen Hogaanka MadashaWadatashiga Qaran.
Haweeney ka mid ah xubnaha baarlamankacusub ee la doortay ayaa balan qaaday iney u isticmaali doonto kursigeeda si loo gaaro isbedelwanaagsan.
“Waxaan balan qaadayaa inaan caawin doonobulshadeyda iyo guud ahaan bulshada si loo sheeko dhibaatoyinka ka jira dhankawaxbarashada, haweenka, caafimaadka, kobcintadumarka iyo in kor loo qaado ka qeybqaadashada haweenka siyaasada iyo hormarintadalka”. Ayay tiri: Samra Ibraahim 31 jir ka tirsanbaarlamanka cusub ee Baydhabo lagu doortay.
Xildhibaan kale oo ka mid ah kuwa cusub ee la doortay ayaa yiri waxan rajeynaa inaansaameynteyda u isticmaalo hormarinta dowladaKoonfur galbeed.
“ Ujeedadeyda waxa ay tahay inaanxildhibaanimadeyda ugu shaqeeyo bulshadeydasi looga hortago gaajada iyo jahliga kuwasoodhib badan ku haya bulshadeyda” ayuu yiriSandheere Maxamed Iftin.
Maamulka Koonfur galbeed ayaa ilaa haddadoortay 15 xubnood, guud ahaan 69 kursi oo loo qoondeeyay.
“Ilaa iyo hadda waxan dhaafnay sidii qof kastanaga filayeen marka la eego howsha baaxada lehoo ay qabteen gudiga hirgalinta doorashooyinkadadban ee heer dowlad goboleed. Doorashoyinkawaxay ku dhaceen jawi degan amaana ah. Waansii wadi doonaa howsha inta ka harsan”.
Dowlada Jubbaland lix xubnood oo baarlamankaah ayaa la doortay tasoo ka dhigeysa xubnaha la doortay ilaa hadda 13 xubnood, guud ahaan 43 kursi oo jubbaland loo qoondeeyay.
“ Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kuguuleysto tartankii xubanimada baarlamanka, waxaan u mahadcelinaya dadkii ii codeeyay. Waxaan dhihi karaa doorashada waxa ay aheydmid xor iyo xalaal ah”. Ayay tiri: Sacdiyo MuuseCabdullahi oo ka tirsan labada xubin eehaweenka ah oo manta lagu doortay Jubbalandcaasimadeeda Kismaayo.
Codeynta xubnaha aqalka sare u matalayadowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maantalaga bilaabay magaalada Jowhar. Labo ka mid ah kuraastaas waxaa ku guuleystay murashixiinhaween ah, tani waxay ka dhigeysaa tirade Aqalka sare ee ilaa hadda la doortay 43 xubnoodguud ahaan dalka.
Mid ka mid ah xubnihii Aqalka Sare ee manta Jowhar lagu doortay ayaa balan qaaday inuumatali doono danaha gobolkiisa “ Madaama aanahay qofkii ugu horeeyay ee la doorto Aqalkasare Hirshabelle waxaan ku dadaali doonaa inaanidiin adeego”. Ayuu yiri: Saciid CusmaanAxmed. “Waa fursad taariikhi ah waxaana balanqaadaya inaan u adeegi doono dadkeyga siadag”.
Cabdinuur Farey wuxuu ku guul dareysatay inuuka mid noqdo xubnaha Aqalka sare laakiin saasay tahay wuxuu aad u amaanay qaabkadoorashada loo qabtay.
“ Waan ku faraxsanahay inaan dhaho doorashadawaxay aheyd mid xor ah. Waxaan rabaa inaancadeeyo inaan wax dood ah ka qabin doorashadala doortay walaalkey, qofka guuleystay. waana u hambalyeynayaa walaalkey”, ayuu yiriCabdinuur.
 Puntland oo ku dhawaaqday billaabashadawejiga labaad ee doorashada Aqalka Hoose, halka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay soogunaanadeen wareeggii koowaad ee doorashada
 Danjire Keating oo carrabka ku adkeeyay mudnaanta oofinta qoondada baarlamaanka ee haweenka Puntland ka dib wareeggii koowaad ee doorashada Aqalka Hoose